Tokkummaa Ummata Muslimaa | NuuralHudaa
Tokkummaa Ummata Muslimaa
Islaamni nageenyaa fi tokkummaa hawaasaatiif xiyyeefanno guddaa kenna. Wanta hawaasa jeequu fi miidhu karaa adda addaatin ittisuuf yaala. Karaalee kanniin keessaa, waan gaariitti ajajuu fi waan badaa irraa dhoowwu, gara tokkummaatti namoota waamu, daangaa darbitoota ammoo rabbiin kan adabu tahuu akekkachiisa.
Kanuma ilaalchisee aayatoota Qur’aana lamaan armaan gadi mee haa xiinxallinuu!
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)
“Haada Rabbii (tokkummaan) hunda ta’aa qabadhaa, adda addas hin bahinaa (hin faca’inaa). Yommuu isin diinota walii turtanii qalbii keessan wal simsiisuun qananii isaatiin obboleeyyan taatan; qarqara boolla ibiddaa irra turtanii isii irraa isin baraare, qananii Rabbii isin irra jiru yaadadhaa. Akka qajeeltaniif Rabbiin akka kanatti keeyyattoota isaa isiniif addeessa.” Suuratu Aali-Imraan 3:103
Hundi keessanuu kitaaba gooftaa keessanii fi qajeelcha Nabiyyi keessanii sirritti qabadhaa. Addaan faffaca’utti wanta isin geessu hin hojjatinaa. Qananii guddaa Rabbiin isin qananiise yaadadhaa: Yaa mu’mintoota yommuu isin Islaama dura diinota walii turtan, Rabbiin isa jaallachuu fi Ergamaa isaa jaallachuu irratti qalbii teessan walitti qabe. Wal-jaallachuu qalbii teessan keessatti darbe. Kanaafuu, tola isaatiin obboleeyyan wal jaallattan taatan. Qarqara ibidda jahannam irra turtan. Islaamaan isin qajeelchee ibidda irraa isin baraare. Akkuma mallattoolee iimaanaa sirrii isiniif ibse, akka karaa qajeelaatti qajeeltaniif, hordoftanii fi irraa hin jallanneef wanta fooyya’iinsi keessan keessa jiru hundas isiniif ifa godha.
Ammas aayata biroo keessatti itti fufuun:
“Isin keessaa gareen namootaa gara wanta gaarii ta’e hundatti waaman, wanta sirrii ta’etti ajajanii fi wanta badaa irraa dhoorgan haa jiraatan. Warri sun isaanumatu milkaa’odha. Akka warra ragaaleen ifaa erga isaaniif dhufanii booda addaan faca’anii fi wal dhabanii hin ta’inaa. Warra san adabbii guddaatu isaaniif jira.” Suuratu Aali-Imraan 3:104-105
Lammiileen Itoophiyaa Sa’uudi keessa jiraatan qaama nageenyaan adamsamanii qabamaa akka jiran himan
Lammileen Itoophiyaa kuniin qaamoolee nageenya mootummaa Sa’uudiin kan Doorsifamaa jiran tahuu himu, dorsiisni kun immoo…
Markazni Fath kan magaalaa Gimbii Marsaa 5ffaaf Barattoota 40 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisise
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti kan argamu markazni Hifzii Qur’aanaa Fathi barattoota waggoota lamaaf barsiisaa…
Al-Yaminul Ghamuus (Kakuu Kijibaa)
Kakuu kijibaa jechuun haqa nama biraa fudhachuuf wanta darbee irratti osoo beekanu kakachuudha. Zuur, Faajirah…
Bidiruun baqattoota fe’atte galaana diimaa keessatti dhidhimuun namoonni hedduun du’an
Lammiileen Afriikaa bahaa irra hedduun isaanii ityoophiyaa irraa tahan, osoo gara Yaman imalaa jiran qarqara…
Godina Haadiyaa Magaalaa Bonooshaatti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame
Naannoo Sabaa fi sab-lammoota Ummattoota Kibbaa godina Haadiyaa aanaa Shaashoogoo magaalaa Bonooshaatti sagantaan Da’awaa guddaan…
Sa’uudiin lammiileen biyya biroo hajjii bara kanaa irratti kan hin hirmaanne tahuu labsite
Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, Sirna hajjii bara 1442 lammiilee Sa'uudii fi namoota biyyattii…